कसिलो पहिरनले प्रियंकालाई तनाव « THULOPARDA.COM: Entertainment News Portal From Nepal
कसिलो पहिरनले प्रियंकालाई तनाव
बलिउड अभिनेत्री प्रियंका चोपडा कला र गला दुवैका कारण चर्चामा छिन् । उनको व्यक्तित्व यति चुलिएको छ कि उनी जुन कार्यक्रममा पुग्छिन्, त्यो कार्यक्रम भव्य हुन्छ । यो कुरा चलचित्रमा पनि लागू हुन्छ । सबै दृष्टिबाट सफलता पाइरहेकी प्रियंकालाई के को तनाव ? कसले दिएको होला तनाव ? खुलदुली हुने नै भयो ।